Chii chandingatenga kuburikidza ne "Pure Player" makambani? | ECommerce nhau
E-commerce yakave nemhedzisiro huru pamusika uripo, kunyanya mumakambani anga asina rutsigiro rukuru rwekuti internet ndeipi, zvisinei mamwe makambani akwanisa kuzvivandudza uye pakupedzisira ave akakurumbira kuburikidza neinternet. Nekudaro, kune makambani anobva internet uye anowanikwa chete pa internet, hapana nzvimbo yepanyama iyo mutengi anogona kushanyira nekutenga zvigadzirwa, aya makambani kana makambani anotambira zita rekuti "Vatambi Vakachena", sezvo ivo vachizivikanwa neizvi uye zvakare nekuve nekuseka zvidzoreso pane zvigadzirwa zvavo, izvo nguva nenguva zvinova zvinoreruka kupfuura chetsika chitoro. Tevere tinokuzivisa iwe kune izvo zvakatengwa zvigadzirwa mune aya marudzi ezvitoro zvepamhepo.
1 Fashoni yepamhepo
2 Online Supermarkets
In the fashoni yenyika, Kune akawanda marudzi evagadziri vakawana mukurumbira nekutenda kumagadzirirwo avo uye nemitengo yakakwira kwazvo. Muchiitiko ichi, kune nzvimbo dzepainternet dzakadai se "Privalia", iyo inotarisana nekutengeserana kwemafashoni, kuisa akasiyana marita ezvigadzirwa zvekutengesa pawebhusaiti yayo, kwete kuzvigumira kune imwe chete, uye nekuita zvidzikisira zvikuru kukwezva vatengi vakawanda kunzvimbo yako.
Hazvina kugadzikana chete tenga mbatya online, asi kune zvakare mukana wekutenga chikafu chako pamhepo uye uchichiendesa chakananga kumusuwo wako. Ulabox supamaketi repamhepo muSpain ndiyo inonyanya kuzivikanwa, ichipa zvipo zvakasiyana siyana mumadhipatimendi ayo akasiyana echikafu, zvinwiwa, hutsanana uye zvinhu zvekuchengetedza dzimba.
La midziyo yekutengesa Izvo hazvina kumbobvira zvakareruka nemakambani akaita seAmazon, inova nhamba yekutanga mue-commerce saiti uye nenzira imwecheteyo mukutengesa zvigadzirwa zvemumba pamhepo, izvo nenzira imwechete iwe yaunogona kutenga kubva kumba kwako uye inogona kununurwa wakananga pasuo rako .
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Chii chandingatenga kuburikidza nePure Player makambani?